ထိထိမိမိစကားပြောနိုင်ဖို့ ၁၂ ချက် – Gentleman Magazine
GM for Men
ထိထိမိမိစကားပြောနိုင်ဖို့ ၁၂ ချက်
အိုင်ဒီယာတွေကို ဝေမျှပေးရတာ လက်ဖျောက်တီးသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ အိုင်ဒီယာတစ်ခုထဲကို ထပ်ခါထပ်ခါကြားနေရရင်တော့ သတိထားမိလာကြပါတယ်။ စကားပြောတဲ့အခါ မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ကို စကားပြောနည်းကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တစ်ယောက်က သူမစကားပြောတဲ့အခါ သုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြထားပါတယ်။ ကောင်းလွန်းလို့ ပြန်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. သင်က သင်ပဲ ဖြစ်နေပါစေ
စကားပြောတဲ့သူတွေကို သူများတွေကို လိုက်တုပြီး မပြောဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ဟောပြောပွဲတွေကို နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုလိုက်မပြောပါနဲ့။ သင်ဟာ သင်ပဲ ဖြစ်နေပါစေ။
၂. အရေးကြီးတာကို ဦးစားပေးပြောပါ
စကားပြောပွဲတွေမှာ အချိန်ကန့်သတ်ပေးထားတာက ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ တဲ့။ အချိန်ကန့်သတ်ထားတော့ အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကို အဓိကထားပြီး ဦးစားပေးပြောဖြစ်ထားပါတယ်။
၃. ဥပမာလေးတွေ ပေးပြောပါ
ပြောချင်တဲ့အချက်ကို ဒါရိုက်ပြောတာထက်စာရင် ပုံပြင်လေးတွေ ဥပမာသာဓက လေးတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ပြီးပြောပါ။ ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူတွေ မှတ်မိစေပါတယ်။
လူတော်တော်များများက ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေပြောရင် မြန်မြန်ဇာတ်လမ်းသိစေပါတယ်။ အမှန်က ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေး အရိပ်အငွေ့လေးတွေ ခံစားချက်လေးတွေနဲ့ ပြောရမှာပါ။
၅. ၃ ဂဏန်းရဲ့ စွမ်းအားကို သုံးပါ
၃ ဆိုတာ စွမ်းအားရှိတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုပါ။ ဟောပြောချက်တွေကို သုံးစုခွဲပစ်ပါ။ ဥပမာ ပြောစရာရှိပေမယ့် မပြောတတ်ဖူးဆိုရင် အရေးကြီးဆုံး အချက်သုံးချက်က ဘာလဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီးပြောလိုက်ပါ။
၆. ဗန်းစကား လျှော့ပြောပါ
ကျွန်တော်တို့ ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ အချင်းချင်းနားလည်တဲ့ ဗန်းစကားတွေ သုံးပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တခြားသူတွေနဲ့ ပြောတဲ့အခါကျ အဲဒါက အခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဗန်းစကား အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် သင်ရဲ့ အဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စကားပြောသလိုပြောပါ။ အဲဒါက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၇. ပရိသတ်ကို Surprise လုပ်ပါ
လူတွေက ကြားနေကျအရာကို ထပ်ခါထပ်ခါကြားနေရရင် အိပ်ချင်လာပါတယ်။ သူတို့ကို နိုးကြားအောင် Surprise လှည့်ကွက်လေးတွေ ထည့်ပြောပါ။
၈. ပြီးပြည့်စုံတာမဟုတ်တဲ့ ဟီးရိုး လုပ်ပါ
လူတွေက အကုန် ပြည့်စုံနေတဲ့ သူတွေအကြောင်း မကြားချင်ပါဘူး။ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်က စွန့်စားကျော်ဖြတ်ခဲ့တာမျိုးကို ပိုသိချင်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Superman ထက် Batman က လူကြိုက်ပိုများပါတယ်။
၉. စကားမပြောခင် စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုလုပ်ပါ
လူတွေကို သင် စင်ပေါ်မရောက်ခင်ပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေအောင် လုပ်ပါ။ Slide ထိုးပြတာတို့ ဘာတို့က အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။
၁၀. ပြီးပြည့်စုံတာချည်း မပြောပါနဲ့
ပြီးပြည့်စုံတာက ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ လူတွေသိချင်တာက အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာအကြောင်း သေသေချာချာပြောပြတာကိုပါ။ စတိတ်ပေါ်ကနေ သင့်ကိုယ်သင် ဂုဏ်ယူစိတ်အပြည့်နဲ့ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွား ဆင်းလာခဲ့ပါ။
၁၁. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လန်းတယ်လို့ ထင်တာလုပ်ပါ
အမေးအဖြေတစ်ခုမှာ ပရိသတ်က ထမေးပါတယ်။ အဝတ်အစား ဘာဝတ်ရမလဲ၊ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ ဘယ်လိုထားရမလဲ တဲ့။ သင့်ကိုယ်သင် လန်းတယ်လို့ ထင်တဲ့ဟာ ဝတ်ပါ။ ကိုယ်ဟန်အမူအရာကျ ကိုယ်နှစ်သက်သလို လှုပ်ရှားပါ။ သင့်ကိုယ်သင် လန်းတယ်၊ မိုက်တယ် ထင်တဲ့ဟာသာ လုပ်လိုက်ပါ။
၁၂. စကားပြောရမှာ ကြောက်နေတာ ပုံမှန်ပါပဲ
လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောဖို့ ကြောက်နေတတ်တာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အကြောက်ဆုံးသူတွေက နောက်ကျ စကားအကောင်းဆုံး ပြောနိုင်ကြပါတယ်တဲ့။ လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောရင် အကြောက်ဆုံးအချက်က အားနည်းချက်တွေကို ထုတ်ပြမိမှာကိုပါပဲ။ စကားထစ်သွားမှာ ကြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေက ပရိသတ်ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ သင့်အလုပ်က သင့်ကိုယ်သင် အရှိအတိုင်း ပရိသတ်ရှေ့မှာ ရိုးရိုးသားသား ထုတ်ပြလိုက်ဖို့ပါ။
မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
ထိထိမိမိစကားပွောနိုငျဖို့ ၁၂ ခကျြ
အိုငျဒီယာတှကေို ဝမြှေပေးရတာ လကျဖြောကျတီးသလောကျ မလှယျပါဘူး။ အိုငျဒီယာတဈခုထဲကို ထပျခါထပျခါကွားနရေရငျတော့ သတိထားမိလာကွပါတယျ။ စကားပွောတဲ့အခါ မအောငျမမွငျ ဖွဈနပေါသလား။ ကြှနျတျောတို့ကို စကားပွောနညျးကြှမျးကငျြ ပညာရှငျတဈယောကျက သူမစကားပွောတဲ့အခါ သုံးတဲ့နညျးလမျးလေးတှေ ပွောပွထားပါတယျ။ ကောငျးလှနျးလို့ ပွနျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
၁. သငျက သငျပဲ ဖွဈနပေါစေ
စကားပွောတဲ့သူတှကေို သူမြားတှကေို လိုကျတုပွီး မပွောဖို့ သတိပေးထားပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အကွိုကျဆုံး ဟောပွောပှဲတှကေို နားထောငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လိုလိုကျမပွောပါနဲ့။ သငျဟာ သငျပဲ ဖွဈနပေါစေ။
၂. အရေးကွီးတာကို ဦးစားပေးပွောပါ
စကားပွောပှဲတှမှော အခြိနျကနျ့သတျပေးထားတာက ကောငျးတဲ့အခကျြပါပဲ တဲ့။ အခြိနျကနျ့သတျထားတော့ အရေးကွီးတဲ့ဟာတှကေို အဓိကထားပွီး ဦးစားပေးပွောဖွဈထားပါတယျ။
၃. ဥပမာလေးတှေ ပေးပွောပါ
ပွောခငျြတဲ့အခကျြကို ဒါရိုကျပွောတာထကျစာရငျ ပုံပွငျလေးတှေ ဥပမာသာဓက လေးတှနေဲ့ တနျဆာဆငျပွီးပွောပါ။ ပုံပွငျဇာတျလမျးတှကေ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ လူတှေ မှတျမိစပေါတယျ။
လူတျောတျောမြားမြားက ပုံပွငျဇာတျလမျးတှပွေောရငျ မွနျမွနျဇာတျလမျးသိစပေါတယျ။ အမှနျက ဖွညျးဖွညျးနှေးနှေး အရိပျအငှလေ့ေးတှေ ခံစားခကျြလေးတှနေဲ့ ပွောရမှာပါ။
၅. ၃ ဂဏနျးရဲ့ စှမျးအားကို သုံးပါ
၃ ဆိုတာ စှမျးအားရှိတဲ့ ဂဏနျးတဈခုပါ။ ဟောပွောခကျြတှကေို သုံးစုခှဲပဈပါ။ ဥပမာ ပွောစရာရှိပမေယျ့ မပွောတတျဖူးဆိုရငျ အရေးကွီးဆုံး အခကျြသုံးခကျြက ဘာလဲဆိုတာ စဉျးစားပွီးပွောလိုကျပါ။
၆. ဗနျးစကား လြှော့ပွောပါ
ကြှနျတျောတို့ ပါတျဝနျးကငျြက လူတှနေဲ့ စကားပွောတဲ့အခါမှာ အခငျြးခငျြးနားလညျတဲ့ ဗနျးစကားတှေ သုံးပွီး ပွောလရှေိ့ပါတယျ။ တခွားသူတှနေဲ့ ပွောတဲ့အခါကြ အဲဒါက အခကျအခဲ ဖွဈစပေါတယျ။ ဗနျးစကား အခကျအခဲကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ သငျရဲ့ အဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျကို စကားပွောသလိုပွောပါ။ အဲဒါက ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
၇. ပရိသတျကို Surprise လုပျပါ
လူတှကေ ကွားနကေအြရာကို ထပျခါထပျခါကွားနရေရငျ အိပျခငျြလာပါတယျ။ သူတို့ကို နိုးကွားအောငျ Surprise လှညျ့ကှကျလေးတှေ ထညျ့ပွောပါ။
၈. ပွီးပွညျ့စုံတာမဟုတျတဲ့ ဟီးရိုး လုပျပါ
လူတှကေ အကုနျ ပွညျ့စုံနတေဲ့ သူတှအေကွောငျး မကွားခငျြပါဘူး။ ထိခိုကျနိုငျတဲ့ လူတဈယောကျက စှနျ့စားကြျောဖွတျခဲ့တာမြိုးကို ပိုသိခငျြကွပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ Superman ထကျ Batman က လူကွိုကျပိုမြားပါတယျ။
၉. စကားမပွောခငျ စိတျဝငျစားစရာ တဈခုလုပျပါ
လူတှကေို သငျ စငျပျေါမရောကျခငျပဲ စိတျလှုပျရှားနအေောငျ လုပျပါ။ Slide ထိုးပွတာတို့ ဘာတို့က အသုံးဝငျနိုငျပါတယျ။
၁၀. ပွီးပွညျ့စုံတာခညျြး မပွောပါနဲ့
ပွီးပွညျ့စုံတာက ပငျြးစရာကောငျးပါတယျ။ လူတှသေိခငျြတာက အောငျမွငျတဲ့လူတဈယောကျဟာ သူစိတျဝငျစားတဲ့ အရာအကွောငျး သသေခြောခြာပွောပွတာကိုပါ။ စတိတျပျေါကနေ သငျ့ကိုယျသငျ ဂုဏျယူစိတျအပွညျ့နဲ့ ဝံ့ဝံ့ကွှားကွှား ဆငျးလာခဲ့ပါ။
၁၁. ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ လနျးတယျလို့ ထငျတာလုပျပါ
အမေးအဖွတေဈခုမှာ ပရိသတျက ထမေးပါတယျ။ အဝတျအစား ဘာဝတျရမလဲ၊ ကိုယျဟနျအမူအရာ ဘယျလိုထားရမလဲ တဲ့။ သငျ့ကိုယျသငျ လနျးတယျလို့ ထငျတဲ့ဟာ ဝတျပါ။ ကိုယျဟနျအမူအရာကြ ကိုယျနှဈသကျသလို လှုပျရှားပါ။ သငျ့ကိုယျသငျ လနျးတယျ၊ မိုကျတယျ ထငျတဲ့ဟာသာ လုပျလိုကျပါ။
၁၂. စကားပွောရမှာ ကွောကျနတော ပုံမှနျပါပဲ
လူတှအေမြားကွီးရှမှေ့ာ စကားပွောဖို့ ကွောကျနတေတျတာ ပုံမှနျပါပဲ။ အကွောကျဆုံးသူတှကေ နောကျကြ စကားအကောငျးဆုံး ပွောနိုငျကွပါတယျတဲ့။ လူတှအေမြားကွီးရှမှေ့ာ စကားပွောရငျ အကွောကျဆုံးအခကျြက အားနညျးခကျြတှကေို ထုတျပွမိမှာကိုပါပဲ။ စကားထဈသှားမှာ ကွောကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါတှကေ ပရိသတျဆုံးဖွတျမှာပါ။ သငျ့အလုပျက သငျ့ကိုယျသငျ အရှိအတိုငျး ပရိသတျရှမှေ့ာ ရိုးရိုးသားသား ထုတျပွလိုကျဖို့ပါ။
မိနျးခလေးတိုငျးတောငျ့တပွီး ယောကျြားလေးတိုငျး အားကစြဖေို့
Introvert တစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲ?
01/10/2021 01/10/2021 Thorn Htet
Knowledge People Social
မိမိကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု တိုးမွငျ့စဖေို့ အသေးအမှားပွောငျးလဲမှုလေးမြား
24/09/2021 20/09/2021 Thorn Htet
Previous: Facebook မှာ ဒါကိုဖတ်ပြီးမှ Like လုပ်ပါ။
Next: တကိုယ်ကောင်းဆန်သူတွေကိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း
ကွီးခငျြ..ရှညျခငျြသူမြားအတှကျ သဘာဝ နညျးလမျး ၅ ခု
ဆရာ ပီမိုးနင်း ရဲ့ မိန်းမစိတ်ကျမ်း စာအုပ်
သူမကို စိတ်ပါလာအောင် ဘယ်လိုပြုစုမလဲ
ပုံစံ ၄၅ မျိုး ထဲမှ ပထမပိုင်း ၁၀ မျိုး
မျက်နှာအနေအထားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်ပုံစံများ
မိန်းမတိုင်း သုတ်ရည် ပန်းထုတ်နိုင်ပါသလား
ဖွားဖက်တော် အရွယ်အစားအတွက် နည်းလမ်းများ